China Hot gbazee nrapado teepu maka enweghị nkebi uwe na-emepụta na ndị ọrụ | H&H
Ọkpụrụkpụ / mm 0.03 / 0.05 / 0.075 / 0.1
Obosara / m / 1.52m dị ka ahaziri
Mpempe Agbaze 78-140 ℃
Ọrụ nka igwe na-ekpo ọkụ ọkụ: 1 70-180 ℃ 15-25s 0.4Mpa
Ngwaahịa a bụ nke usoro TPU. Ọ bụ ihe atụ emere maka ọtụtụ afọ iji zute arịrịọ ndị ahịa na-agbanwe na njirimara mmiri. N’ikpeazụ ọ na-aga na steeti tozuru etozu. nke kwesịrị ekwesị ka ọtụtụ ndị mejupụtara enweghị nkebi uwe ime, bras, sọks na-agbanwe akwa na ọ bụ na-agbanwe na mmiri na-àmà atụmatụ. Maka itinye akwa uwe na-enweghị ntụpọ, a na-eji ya etolite etolite na akara akara akwa na akwa. 8mm, 10mm, 12mm, 15mm bụ ndị nkịtị obosara ndị mmadụ na-eji. Nọmalị anyị na-emepụta oké ọhịa na-apụta nke obosara 1.52m, na bee dị ka ndị ahịa 'mkpa obosara.
1. Mmetụta aka dị nro: mgbe etinyere ya na uwe, ngwaahịa a ga-enwe uwe dị nro na nkasi obi.
2. Water-asa na-eguzogide ọgwụ: mgbe na-ekpo ọkụ okpomọkụ saa ọnọdụ, ọ gaghị agbajikwa na-anọgide na ọ bụ atụmatụ. Ọ nwere ike ibu karịa 15 ugboro 40 ℃ ịsa mmiri.
5. Elastic feature: Ngwaahịa a na-arụ ọrụ nke ọma na owu-spandex ákwà.
LQ361T Hot gbazee nrapado ihe nkiri a na-ejikarị ya na Seamless uwe ime na uwe ndị ọzọ na-enweghị ntụpọ nke ndị ahịa na-ewu ewu nke ọma n'ihi mmetụta dị nro na nke dị mma ma ọ bụ ekele mara mma. Ọ bụkwa ihe na-eme n'ọdịnihu na iji ihe agbaze agbaze na-ekpo ọkụ maka akara akara kama ịkwa akwa ọdịnala. Maka panti na-enweghị ntụpọ, a na-ejikarị ngwaahịa anyị eme ihe na panti. Maka n'úkwù, anyị nwekwara teepu spandex dabara adaba maka ịkwado ọzọ. N'ihi oke agbaze ya na ọnọdụ ọrụ ya, teepu a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka ngwaahịa ikpeazụ nwee nguzogide okpomọkụ ka mma, na onye ọrụ agaghị emebi ma ọ bụ mee ka gluu gbazee mgbe ọ na-asacha na mmiri ọkụ. Nke a bụ isi ngwa nke ngwaahịa a.
LQ361T na-agbaze ihe nkiri na-agbaze agbaze, n'ihi na ọ na-agbanwe agbanwe na ebe agbaze ya dị elu, nwekwara ike iji ya na ngwaahịa ndị ọzọ dịka sọks na-enweghị ntụpọ, yoga suut na uwe ndị ọzọ na-agbanwe. The arụmọrụ bụ nnọọ ngwa ngwa na mama mmetụta dị mma. The ọrụ nke ntọhapụ akwụkwọ bụ chọta ọnọdụ nke nwere ike ime ka usoro adaba. E jiri ya tụnyere teknụzụ ọdịnala, uru nke ngwaahịa a bụ ihe doro anya.
Nke gara aga: TPU Hot gbazee nrapado nkiri maka uwe n'èzí
Osote: Eva Hot gbazee nrapado ihe nkiri maka akpụkpọ ụkwụ